Muwaadiniin u dhashey Britain oo Sucuudiga u joogay gudashada Acmaasha Xajka oo shil ku dhintay – Radio Muqdisho
Muwaadiniin u dhashey Britain oo Sucuudiga u joogay gudashada Acmaasha Xajka oo shil ku dhintay
Dalka Boqortooyada Sucuudi Carabiya ayaa waxaa ku geeriyootay iulaa 4 qof oo Mulisiin Britain u dhalatay halka 12 kalena ay dhaawacmeen ka dib markii uu shil galay gaari Bus ah oo ay saarnaayeen,iyaga oo cumro u jooga Sacuudiga.
, sida ay sheegtay shirkad dhanka socdaalka ka shaqaysa.
Sida ay shaacisay shirkad dhanka socdaalka ka shaqaysa,Raj Begum Xuseen oo 70 jir ah ayaa ka mid ahayd dadka dhintay, waxaa kale oo la sheegay in ay dhinteen nin kale oo da’ahaa iyo hooyo iyo wiil ay dhashay.
Wararka ayaa sheegaya in dadka dhintay gaarigii ay la socdeen uu ku dhacay gaari kale,xili dadkaasi ay acmaasha Cumarada ku soo gudanayeen masaajidka Nabiga N.N.K.H ee magaalada Madina,gaariga ku dhacay ayaa la sheegay in uu waday shidaal,kaasi oo sababay in holiciisa uu qabsado gaarigii kale.
Tirikoob la sameeyey ayaa lagu cadeeyey in 18 ruux ayaa baska saarnayd marka uu shilku dhacay, dhammaantood isbitaal ayaa loola cararay, halkaas oo wali lagu dabiibayo lix ka mid ah dhaawicii.
Raj oo dadka dhintay ka mid ah ayaa dhashay lix ilmood waxayna ayay u ahayd 13 kale, waxaa safarka ku wehelisay walaasheed oo ka yar oo badbaaday balse dhaawac soo gaaray.
Maxamed Salah Oo Ku Guuleystay Laacibka Ugu Fiican H.Ingiriiska
Wasiirka Warfaafinta, Dhaqanka iyo Dalxiiska XFS oo soo xeray shirkii Badqabka Suxufiyiinta ee ka socday Muqdisho